लोग्नेले बढी माया गरेको भन्दै पत्नीले मागिन् डिभोर्स हेर्नुस त ! - Aajako Nepali Khabar
लोग्नेले बढी माया गरेको भन्दै पत्नीले मागिन् डिभोर्स हेर्नुस त !
पति पत्नीबीच झैझगडा हुँदा, मन नमिल्दा तथा पतिले राम्रोसँग पालन पोषण नगर्दा पति पत्नीबीच डिभोर्स हुने गरेको त थाहा भएकै कुरा हो । तर यो दुनियामा केही महिला यस्ता पनि हुँदा रहेछन् जसले लोग्नेले बढि माया गर्दा पनि डिभोर्स माग्दा रहेछन् ।
पत्यारै नलाग्ने यो घटना युएइको हो । ती महिलाले आफ्नो लोग्नेसँग डिभोर्स माग्दा यस्तो कारण उल्लेख गरेकी छिन् कि त्यो सुन्दैमा अनौठो लाग्दछ । लोग्नेले आफुलाई आवश्यकता भन्दा धेरै माया गरेको उनको आरोप छ ।
एक वर्षअघि विवाह गरेकी ती महिलाले हालै अदालतमा डिभोर्सका लागि निवेदन दिइन् ।लोग्नेले आफुलाई चाहिने भन्दा धेरै प्रेम गरेको र आफुलाई बढि प्रेम मन नपर्ने उनको तर्क छ ।
अदालतमा भएको बहसका क्रममा उनले इजलासमा भनेकी छिन्, ‘मेरो पति न त म सँग झगडा गर्छन्, न त मलाई कहिल्यै चिन्तित हुन दिन्छन् । लोग्नेले आफुलाई अत्यन्तै धेरै माया गर्दा म वाक्क भएँ र प्रेमकै कारण मेरो जिवन नर्क बन्यो ।
त्यसैले मैले डिभोर्स गर्ने निर्णय गरेकी हुँ ।’लोग्नेको अत्यधिक प्रेम र स्नेहबाट आफु प्रताडित भएको उनको भनाई छ । बिहे भएको एक वर्षमा एकपटक पनि झगडा हुन नपाएको उनले बताएकी छिन् । एजेन्सीको सहयोगमा
यो पनि पढ्नुहोस : वास्तुका अनुसार घरको उत्तर भागमा ढोका खोल्न वा पैसा र पैसाको दराज खोल्न शुभ मानिन्छ। साथै पैसाको लकर नजिक झाडू वा फोहर राख्ने डस्वीन जस्ता चीज कहिलै नराख्नुहोस्।
७ वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय घोर भर्त्सनाः नेपाल विद्यार्थी संघ
किन रोकियो ‘भद्रगोल’ ? हेर्नुहोस यस्तो रैछ कारण !